ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် ရာသီအစပွဲတွေကို လွဲချော်မယ့် မန်ယူကွင်းလယ်လူ မာတစ်
ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် ရာသီအစပွဲတွေကို လွဲချော်မယ့် မန်ယူကွင်းလယ်လူ မာတစ် Matic
29 Jul 2018 . 5:20 PM
မန်ယူ Manchester United အသင်းရဲ့ ဆားဘီးယားကွင်းလယ်လူ မာတစ် Matic ဟာ ဒဏ်ရာခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လာမယ့် ၂၀၁၈-၁၉ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအစ ပွဲတွေကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မာတစ်ဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းက နိုင်ငံအသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားရင်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီဒဏ်ရာကို အမေရိကန်မှာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ လီဗာပူးလ်ကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ICC ပွဲအပြီး မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်။ မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့ မာတစ်ရဲ့ ဒဏ်ရာက ဘယ်လိုဒဏ်ရာမျိုးဆိုတာကို မပြောခဲ့ပေမယ့် မာတစ်ဟာ Philadelphia မှာ Scan နဲ့ ဆေးစစ်မှုခံယူဖို့အတွက် ခြေစမ်းပွဲကစားမယ့် အသင်းလူစာရင်းကနေ နုတ်ထွက်သွားပြီလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မော်ရင်ဟိုက”မာတစ်ဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဘယ်လောက်အထိ အနားယူရမလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက ပြန်လာပြီးကတည်းက သူ့မှာ ဒဏ်ရာရရှိနေတာဖြစ်ပြီး အားလပ်ရက်မှာ အနားယူခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒဏ်ရာက သက်သာလာခြင်းမရှိတာကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။ အခုလောလောဆယ် မန်ယူအသင်းမှာ ဒဏ်ရာရကစားသမား တချို့ရှိနေပြီး မာတင်အပြင် နောက်ခံလူ ဗလင်စီယာ Valencia ဟာ ခြေသလုံးကြွက်သားစုတ်ပြဲတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် မန်ချက်စတာကို ပြန်သွားပြီဖြစ်သလို စမောလင်း Smalling နဲ့ ကစားသမားသစ် ဒါလော့တ် Dalot တို့မှာလည်း ဒဏ်ရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
REF:The Sun,Daily Mail
Photo:Manchester Evening News,The Sun
ဒဏျရာပွဿနာကွောငျ့ ရာသီအစပှဲတှကေို လှဲခြျောမယျ့ မနျယူကှငျးလယျလူ မာတဈ Matic
မနျယူ Manchester United အသငျးရဲ့ ဆားဘီးယားကှငျးလယျလူ မာတဈ Matic ဟာ ဒဏျရာခှဲစိတျကုသမှု ခံယူရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ လာမယျ့ ၂၀၁၈-၁၉ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအစ ပှဲတှကေို လှဲခြျောမှာဖွဈပါတယျ။ မာတဈဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားတုနျးက နိုငျငံအသငျးအတှကျ ပါဝငျကစားရငျး ဒဏျရာရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး အဲဒီဒဏျရာကို အမရေိကနျမှာ ခှဲစိတျကုသမှုခံယူရမှာဖွဈတယျလို့ လီဗာပူးလျကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ICC ပှဲအပွီး မနျယူနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho က အတညျပွုပွောကွားခဲ့တယျ။ မျောရငျဟိုအနနေဲ့ မာတဈရဲ့ ဒဏျရာက ဘယျလိုဒဏျရာမြိုးဆိုတာကို မပွောခဲ့ပမေယျ့ မာတဈဟာ Philadelphia မှာ Scan နဲ့ ဆေးစဈမှုခံယူဖို့အတှကျ ခွစေမျးပှဲကစားမယျ့ အသငျးလူစာရငျးကနေ နုတျထှကျသှားပွီလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
မျောရငျဟိုက”မာတဈဟာ ခှဲစိတျကုသမှုခံယူရမှာဖွဈပါတယျ။ သူ ဘယျလောကျအထိ အနားယူရမလဲဆိုတာတော့ ကြှနျတျော မသိပါဘူး။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက ပွနျလာပွီးကတညျးက သူ့မှာ ဒဏျရာရရှိနတောဖွဈပွီး အားလပျရကျမှာ အနားယူခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒဏျရာက သကျသာလာခွငျးမရှိတာကွောငျ့ ခှဲစိတျကုသမှုခံယူရတော့မှာဖွဈပါတယျ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။ အခုလောလောဆယျ မနျယူအသငျးမှာ ဒဏျရာရကစားသမား တခြို့ရှိနပွေီး မာတငျအပွငျ နောကျခံလူ ဗလငျစီယာ Valencia ဟာ ခွသေလုံးကွှကျသားစုတျပွဲတဲ့ဒဏျရာကွောငျ့ မနျခကျြစတာကို ပွနျသှားပွီဖွဈသလို စမောလငျး Smalling နဲ့ ကစားသမားသဈ ဒါလော့တျ Dalot တို့မှာလညျး ဒဏျရာရှိနတောဖွဈပါတယျ။
by Naing Linn . 44 mins ago